Adebayo Akinfenwa tantaram-pitiavana momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Home TOROHEVITRA FOTSORATRA TSY MISY MPANJAKA Mpilalao Football English Adebayo Akinfenwa tantaram-pitiavana momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra malaza amin'ny anarana; "Ny biby". Ny Adebayo Akinfenwa ny tantaram-pitiavan'olon-tsy fantatra momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ireo zava-niseho mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny fanadihadiana dia midika ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny ankamaroan'ny zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny olona rehetra ny tanjaka ara-batana sy ny vatana matanjaka, saingy vitsy no mihevitra ny Biografia Adebayor Akinfenwa izay mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, andao hanomboka.
Adebayo Akinfenwa Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Voalohandohan'ny fiainana
Saheed Adebayo Akinfenwa dia teraka tamin'ny andro 10 tamin'ny 1982 tao Islington, Royaume-Uni. Teraka tamin'ny raim-pianakaviana Miozolomana sy reny kristianina izy.
Ny akanjon'i Akinfenwa, na dia zaza aza, dia nanome azy anaram-bosotra 'Ny biby'. Tamin'izany fony mbola zaza izy dia mpankafy lehibe tao Liverpool izy. Ny mpilalao tiany indrindra dia i John Barnes. Hoy izy indray mandeha ... "Tamin 'izany dia niriko foana ny lobolan' i Steven Gerrard. Nolazaiko tamin'ny namako indray mandeha fa raha misy olona mividy ny akanjony eo anoloako, dia hanana olana izahay. " Tsy mahagaga raha nahazo ny lobaka izy.
Ny fanangonana azy dia tsy voatery ho fitahiana foana, na izany aza, ary matetika dia voaporofo fa nisy enta-mavesatra nandritra ny fahazazany. Lehibe hatramin'ny fiandohan'ny taona, ny vokatry ny lovan'ny Nizeriana Yoruba sy ny fahazatoan'ny sakafo matsiro dia nahatonga an'i Akinfenwa hiady amin'ny olona hahita ny haben'ny habeny.
Amin'ny maha zatovo azy, dia niditra tao amin'ny klioba Litoanianina FK Atlantas izy noho ny torohevitry ny mpiasany, izay nahafantatra ny mpikambana iray tao amin'ny ekipa mpikarakara azy ny rahalahin'ny vadiny. Nahazo fanararaotam-pahefana avy amin'ny mpankafy izy. Amin'ny teniny ...
"Tamin'ny lalao voalohany talohan'ny fizaran-taona dia naheno aho" Zigga, Zigga, Zigga, mamono ny ****** n ***** ". Izaho no 18 ary tsarovy fa manontany tena aho hoe inona no nahazo ahy ", hoy izy. 'Indray andro, zazavavy 11-taona dia nihazakazaka nanatona ahy ary niteny hoe' nandrotsaka poofa mainty teo amin'ny FACE 'i Hitler. Nantsoiko i Yemi zokiko lahy ary niteny hoe: "Tonga any an-trano aho. Fa hoy izy: 'Afaka miditra an-trano ianao ary avelao handresy na hijanona izy ireo ary hampiseho azy ireo ny momba anao. Taorian'ny nahazoako tamin'io taona io, nihevitra aho fa tsy misy zavatra tsy azoko resena amin'ny baolina kitra. "
Ny fampijaliana ara-pananahana dia nanosika an'i Akinfenwas hiverina any Royaume-Uni amin'ny fiandohan'ny 2003. The 'Bibidia' dia lasa mpitia taorian'izay. Nanatevin-daharana ny tompon-daka Ligy Premier League Barry Town izy nanampy azy ireo handresy ny fifaninanana Welsh Cup sy Wales Premier League nandritra ny fotoanany tao Jenner Park. Na dia izany aza, fifandimbiasam-bava fotsiny ihany no nahitàna azy, nisedra olana ara-bola ny klioba ary namoaka ny ekipa mpilalao matihanina. Nandany ny klioban'ny 10 izy nandritra ny valo taona, ary efatra tao anatin'ny herintaona. Mpilatsaka an-tsambo.
Nanomboka hatreo, Adebayor Akinfenwa dia nilalao ho an'ny klioban'ny 12 mitifitra ny tanjona 204 ao amin'ny 631. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Adebayo Akinfenwa Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Relationship Life
Miaraka amin'ny paparazzi foana ny fisakafoanana sy ny fomba maro hifandraisana amin'ny media sosialy, dia mety ho sarotra ny hitazona ny fiainanao amin'ny mason'ny vahoaka. Izany no nitranga tamin'i Adebayo Akinfenwa izay tsy avelan'ny vadiny hanaraka azy amin'ny hetsika ara-tsosialy ary hanatrika ny antoko farany. Tsy misy firaketana ny fifandraisana teo aloha (namana sy vady) ao amin'ny aterineto. Na izany aza, Adebayo Akinfenwa dia mampiasa ny zanany mba hamela izao tontolo izao hahafantatra fa dadany mahafinaritra izy. Hita izany rehefa nandefa sary iray momba ny akanjony ho toy ny Christmas Christmas ho an'ny zanany vavy izy.
Adebayo Akinfenwa dia fantatra ihany koa amin'ny maha-ray izay mandany fotoana amin'ny hatsaràny ny zanany amin'ny endriny sy ny endriny. Ny zanany lahy fantatra amin'ny fananganana lanja kely dia nomena anarana hoe mpankafy ny dadany 'mini beast'.
Mametraka miaraka amin'ny sary voatanisa 'daddy and son', Akinfenwa nanoratra hoe: 'Tsy afaka manomboka (sic) tsy ho ela aho mieritreritra. Nandray ahy ahoy Lil olona mankany amin'ny birao 2nd #MiniBeastInTraining. '
Adebayo Akinfenwa Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Akinfenwa dia teraka tamin'ny raim-pianakaviana Miozolomana sy ny reny Kristiana.
"Raha vao nandeha ny Ramadany dia nifady hanina haingana ny dadanay ary dia niova ny zavatra rehefa nanomboka namaky Baiboly isan'andro aho ary nandeha niangona. Ny reniko no nanintona ahy. Mamaky Baiboly isan'andro aho ary manatrika ny fiangonana isaky ny alahady. " Hoy i Akinfenwa.
Androany, Kristiana mpihaino izy izay mamaky ny Baiboly isan'andro ary manatrika ny fiangonana isaky ny alahady, ilay mpibaiko dia milaza ny finoana fa ho tanteraka, na inona na inona avy amin'Andriamanitra ary ny ohatry ny ray aman-dreniny. Manana anarana atao hoe rahalahy izy; Dele Akinz sy Yemi. Ity ambany ity ny sarin'i Dele izay mozika.
Nosoratany ny sary etsy ambony; 'I & @delemusic dia vita tao amin'ny toeram-pandihizana & u dia mazava ho azy fa mahita ny iray aminay tongaork out & izay iray, tonga hipoitra. Tsy nahazo dipoavatra be izy tao #GymBuddy. '
Fikambanana rugby maro sy oniversite amerikana no nifankahita tamin'ny fianakaviany mba handresy lahatra an'i Akinfenwa hanova fanatanjahantena noho ny habeny sy ny heriny. Nianjera anefa izany.
Adebayo Akinfenwa Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Warned Diego Costa
Niteny tamin'i Diego Costa izy."Raha misy lehilahy iray tsy tianao ho tezitra, dia 'The Beast. Tsy maintsy mitazona izany tena izy aho. Raha nidina teo izy dia tsy maintsy namoy ny aiko Diego Costa aho. Tiako izy amin'ny maha-mpilalao azy saingy misy iray ihany no nandresy raha manohitra ahy izy."
Adebayo Akinfenwa izay mpilalao an-tsitrapo iray ho an'ny filohan'ny klioba Fan Steven Gerrard, Adebayo Akinfenwa, dia nampitandrina ny mpitsikilo Diego Costa momba ny fihaonany amin'ny ho avy amin'ny kapiteny Liverpool. Ao amin'ny Instagram Post, ...
Adebayo Akinfenwa Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Lehilahy matanjaka indrindra amin'ny baolina kitra
Akinfenwa dia nanjary fanta-daza tamin'ny naha-mpilalao baolina kitra malaza indrindra eran-tany amin'ny alàlan'ny fanovàna samihafa amin'ny andian-dahatsary FIFA. Tamin'ny Septambra 2014 dia nasaina hanatrika ny lanonana fanokafana izy FIFA 15 miaraka amin'ireo olo-malaza samihafa sy mpilalao Premier League toa an'i Rio Ferdinand, George Groves ary Lethal Bizzle.
Akinfenwa dia voalaza fa nanodidina ny vato 16 (101 kg) ary afaka mitsitsy ny 200 kg, efa ho avo roa heny ny lanjany. Mamoaka akanjo fitafiana antsoina izy Modely amin'ny biby izay milalao ny lazany mafy.
Adebayo Akinfenwa Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Nandefa bitsika tao amin'ny 39,000 izy
Nandritra ny lalao fiadiana ny FA tamin'ny Alatsinainy alina, nisy ny bitsika 39,000 nirohotra mifandraika amin'i Akinfenwa. #BeastMode dia ny tenifototra malaza fahatelo tamin'ny Twitter no lasa adala noho ny mahery fo tao Wimbledon.
"Ny mofomamy amin'ny biby dia an-tsaina," hoy izy nanazava. "Ny mofomamy amin'ny biby dia mikasika ny fampiharana ny tenanao sy ny fifehezana ny fetran'ny olona napetraka aminao."
Raha tsy mampihorohoro ny Ligy Rantsana roa izy, dia mahita fotoana ihany koa i Akinfenwa mba hikarakarana tariby mitafy 'Fitaovam-biby' anarana.
ADEBAYO AKINFENWA dia navela hatezerana taorian'ny nilazàny ny hatsaràny Fifa 18. Nomena ny 98 izy avy amin'ny 99 izay niteraka hatezerana. Hoy i Akinfenwa: "Noho izany dia manana fotoana tsara kokoa ianao ary midina ianao - miandry, tena. Ny tanjona 18 tamin'ny taon-dasa sy ny kilalao 50-odd - aiza ny fanajana ?. " Akinfenwa dia nandresy ny fifaninanana avy amin'i Christopher Samba izay faharoa, Oguchi Onyewu (fahatelo) sy Kendall Watson (fahefatra) no mpilalao matanjaka indrindra. Namoaka lahatsary tao amin'ny Twitter izy avy eo mba hanandratra ny vatany mba hanaporofoany ny heviny.
Nanazava ny EA Sports izy tao amin'ny sioka ary nanoratra hoe: "Yo @EASPORTSFIFA inona no nataon'ireo rahalahy hahazoana ny 99strength #BMO #Fifa18 #ComingForFifa19."
Adebayo Akinfenwa Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Manana vato 16 izy
Akinfenwa dia 5ft 11 ao amin'ny pejiny 16 mahery na 102kg. BMI izany amin'ny 31.3 na manodidina ny lanjan'ny vatany tahaka ny Anglisy rugby hooker Tom Youngs. Ny tarehiny manjavozavo sy boribory dia mahatonga azy ho lavitra ny sifotra, modely toy ny rafitra misy olona Cristiano Ronaldo.
Nilaza izy fa efa nisy hatrany "Malaza be", ary efa niady mafy mihitsy aza izy mba hahatonga azy ireo ho mpilalao baolina kitra handray azy. "Nolazain'ny olona fa lehibe loatra aho mba hilalao baolina kitra," hoy izy. "Zato zato taty aoriana, tsy izaho. Tsy misy fetra azo atao amin'izay tianao hatao. "
Adebayo Akinfenwa Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Azony atao ny mampiasa milina fanontam-pirinty 180kg
Manana fiononana amin'ny fampiakarana lanja mavesatra izy ary miaiky fa ny mpitantana teo aloha dia tsy maintsy "Asio izy ao" mba hampitsaharana ny fandaniana azy lava loatra ao amin'ny gym.
Ny tanjon'i Akinfenwa dia neken'ny fandefasana lahatsary Fifa, izay noheveriny ho ilay mpilalao baolina matanjaka indrindra eran-tany, miaraka amin'ny fanamafisan'ny hery 97 avy amin'ny 100.
Adebayo Akinfenwa Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Miala tsiny amin'ny mpilalao NFL izy
Matetika i Akinfenwa no mpilalao baolina. Tsy voatery ho toy ny karazan'ny mpilalao baolina kitra. Ilay mpikomy dia niaiky fa nokaramain'ny polisy iray izay nanosika azy ho mpilalao iray ao amin'ny NFL Amerikana.
Akinfenwa dia faly tamin'ny fametrahana ny varotra navotsotra mivantana ary nilaza taminy hoe: "Manao baolina mahazatra aho."
FACT CHECK: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaram-pahaterainay Adebayor Akinfenwa momba ny tantaram-piainana malaza. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.
Ben Chilwell tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa